संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजबाट आएका ५ जना क्वारेन्टाइनमा ! ६ जनाको खोजी – Sagarmatha Online News Portal
संक्रमित युवतीसँगै कतार एयरवेजबाट आएका ५ जना क्वारेन्टाइनमा ! ६ जनाको खोजी
महोत्तरी । गत शुक्रबार (चैत ७ गते) कतार एवरवेजबाट आएका यात्रुमध्ये महोत्तरीका ५ जना सम्पर्कमा आएका छन् । सो विमानबाट आउनेमा ११ जना जिल्लाका रहेकामध्ये ५ जना सम्पर्कमा आएको र सबैलाई प्रारम्भिक स्वास्थ्यजाँचपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
अन्य ६ जनाको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका पाँचै जनाको अवस्था सामान्य छ । सोही विमानबाट आएकी एक युवतीमा कोभिड-१९ पुष्टि भएपछि अन्य यात्रीको खोजी तीव रुपमा थालिएको हो ।